၂၀၀၉ အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်စံနှုန်းလမ်းညွှန် Martech Zone
MarketingSherpa's ဖြင့်သင်၏အီးမေးလ်ရလဒ်များကိုတာဝန်သိစွာနှင့်ထိရောက်စွာတိုးမြှင့်ပါ 2009 အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Bechmark လမ်းညွှန်.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတွင်ခက်ခဲသောအပိုင်းဖြစ်သည့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်နည်းလမ်းများရှာဖွေသည်။ အီးမေးလ်သည်စျေးကွက်သမားများကသူတို့၏ဖောက်သည်အခြေပြုဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အရှိဆုံးနှင့်အလွဲသုံးစားပြုသည့်နည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏အီးမေးလ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာတာဝန်သိစွာနှင့်ထိရောက်စွာရောင်းရန်ဖြစ်သည်။ MarketingSherpa ၏ ၆ နှစ်မြောက်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေမှုလမ်းညွှန်သည်သင်၏ဘတ်ဂျက်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ စာရင်းပြုစုခြင်း၊
ဒီနှစ်ထုတ်ဝေမှုကအရမ်းကိုသက်ဆိုင်မှုရှိတာကခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းတွေအတွက်လက်တွေ့ကျအဖြေတွေကိုပေးတာပါ။ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းအချိန်ရောက်သောအခါသင်သည်ဖောက်သည်များမည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်ကိုသိရန်လိုအပ်ပြီးသင်၏တုန့်ပြန်မှုနှုန်းသည်အခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းရှိမရှိပြသရန်လိုအပ်သည်။ အီးမေးလ်သည်နိုင်ငံတကာတွင်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှအထူးကဏ္ Section သစ်တစ်ခုကသင်သည်နိုင်ငံအမျိုးမျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ သိရန်လိုအပ်သည့်အရာများကိုပြောပြသည်။ စည်းမျဉ်းများနှင့်အဘယ်သို့သောသူတို့အားနိုင်ငံများတွင်အလုပ်လုပ်တယ်။
အီးမေးလ်ကိုဖတ်ရှုပြီး 2009 Email Marketing Benchmark လမ်းညွှန်ကသင့်အားစားသုံးသူများ၏အီးမေးလ်များကိုမည်သို့ကြည့်ရှုနေသည်၊ အီးမေးလ်ကိုသူတို့မည်သို့ရှုမြင်သည်၊ သင့်အားမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့အပူစွမ်းအင်အသစ် ၈ ခုဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအားပေးလိမ့်မည်။ သင်၏အီးမေးလ်များ။
Email Marketing Benchmark လမ်းညွှန်တွင်လည်း -
205 ဇယား, 66 ဇယားနှင့်ပုံများ
1,763 Real-Life စျေးကွက်များထံမှသုတေသန
အီးမေးလ်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ဖို့6Point Plan ကိုအပါအဝင်အထူးအစီရင်ခံစာအသစ် 12 အသစ်
၈“ ကွင်းဆင်းမှတ်စုများ” အသစ်လေ့လာမှု
download လုပ်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ 2009 အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစံနှုန်းလမ်းညွှန်အလုပ်အမှုဆောင်အကျဉ်းချုပ်
အကယ်၍ သင်ဟာစျေးကွက်သမားတွေကသူတို့ရဲ့အီးမေးလ်စျေးကွက်ကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အထူးရှုပ်ထွေးတဲ့ 8 the Field From Notes? ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများ။
အီးမေးလ်စျေးကွက်တစ်ခုအနေနဲ့သင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းမေးနေတယ်၊ ​​ဒါမှမဟုတ်ခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းတွေမေးနေတာလားဘယ်နည်းလမ်းကအကောင်းဆုံး ROI ရလဲ။ Email Marketing Benchmark Guide သည်မည်သည့်အမြန်ဆုံးသော ROI ရကြောင်းကိုသာမကသင့်အားမည်သည့်အဆိုးဆုံးကိုလဲပြောပြလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သင်၏အီးမေးလ်နည်းဗျူဟာ၏ ROI ကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်မည်သည့်စမ်းသပ်မှုများသည်အမှန်တကယ်အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းသင်ရှာဖွေပါလိမ့်မည်။
9:2008 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 50
ဤသည်ငါ့အဘို့ကြီးစွာသောလမ်းညွှန်ပါ! ကျွန်ုပ်မိသားစုသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များတွင်ပါ ၀ င်ပြီးကျွန်ုပ်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုနှစ်သက်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ကိုကျွန်ုပ်၏အာရုံသို့ယူဆောင်လာသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ 🙂